Abasebenzi bezicishamlilo bavala imigodi emgwaqeni | Scrolla Izindaba
Abasebenzi bezicishamlilo bavala imigodi emgwaqeni
Three Free State firefighters have decided to do something about a pothole on the N8 near Botshabelo that's been wrecking cars.
Via @ScrollaAfrica #RealNewsForMobile#firefighters #FreeState #Potholes pic.twitter.com/R1ZM2n6k2u
— Scrolla Africa (@ScrollaAfrica) February 16, 2021
Abasebenza ezicishamlilweni abathathu base-Free State bathathe isinqumo sokwenza okuthile ngomgodi osemgwagqeni ku-N8 ngase-Botshabelo obulokhu umosha izimoto.
Abezicishamlilo – uLawrence Mosala, uClinton Lemmetjies noJonathan Boucher – baqoqe imali engama-R250 phakathi kwabo ukuthenga usimende ukuvala umgodi oyingozi.
UMosala utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi: “Leyo nkinga ixazululiwe, manje sizolandela eminye imigodi ukuze siyilungise.”
Abashayeli bezimoto basendaweni bajabulile.
Umshayeli wemoto uLebogang Tlotleng wase-Botshabelo uthe umgodi ofanayo walimaza amarimu amabili ku-Opel Astra yakhe.
“Bengibuya emngcwabeni ebusuku ngempelasonto ngesikhathi ngibona izimoto zenza ama-hazard,” uyasho.
“Bengingazi ukuthi kwenzakalani ngakho angizange ngehlise ijubane ngashaya umgodi. Yilapho engabona khona abanye abashayeli eduze komgwaqo beshintsha amathayi. Enye imoto ishaye umgodi ngenkathi ngibhizi. Sasicishe sibe yisithupha ebesishintsha amathayi.”
UBongani Ngono wase-Selosesha, e-ThabaNchu uthe umgodi ushiye i-Peugeot 207 yakhe ilimele isondo ngoLwesithathu olwedlule.
Umshayeli wetekisi uMosimane Lephoi ubonge abezicishamlilo ngosizo lwabo.
“Yilabo kuphela abajwayele umgwaqo abangawugwema,” uyasho.
“Lokho okwenziwe yilaba balisa kudinga ukushayelwa ihlombe. Bangabasindisi bempilo bangempela. Ngibafisela impumelelo emsebenzini wabo futhi ngiyathemba ukuthi bazonyuselwa esikhundleni ngoba yilokho abakufanele.”